राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन पार्टीले निर्णय गर्ने विषय होइन | रुपान्तरण
राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन पार्टीले निर्णय गर्ने विषय होइन
उनले भने,‘सरकार र राष्ट्रपतिको विषय भएपनि पार्टीको सरकार भएको हुनाले पार्टीकै सुझाव दिने तहमा जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यो प्रस्ताव र अब अर्थमन्त्रीज्यू के हुनुहुन्छ ? अर्थमन्त्रीको पनि कार्यकाल २० गते नै सकिँदैछ । अब यी दुई जनाको नाममा नै लडाई हुन्छ कि भनेर सारा मान्छेलाई लागेको छ । यो व्यवस्थापन गर्न नसकिने विषय नै छैन् । यसको एकदमै उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसको रिजल्ट के हुन्छ ? मैले अहिले बोल्न हतारो हुन्छ । एक÷दुई दिन कुर्न म साथीहरुलाई अनुरोध गर्छु । त्यसपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ ।’
उनले जनताले जुन किसिमको विश्वास नेकपालाई दिएका छन् र सरकार चलाउने जुन पाँच वर्षको म्याण्डेट दिएका छ्न् त्यसबाट नेतृत्व दायाँबायाँ नहुने विश्वास दिलाए । उनले कोही कसैलाई लागेर ‘यसमा विचलित गराइहालौं अथवा म हुँ’ भन्ने लागेको छ भनेपनि त्यो आफ्नो विचारमा असफल हुने ठोकुवा गरे ।
उनले भने,‘त्यस्तो असफलताको बाटोमा कोही पनि नलाग्नु नै श्रेयकर हुन्छ ।’ फरक प्रसँगमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अहिले नेपालको अत्यन्तै अनुकुलतामा गैरहेको विश्वास दिलाए । उनले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसदको रोस्ट्रममा उभिएर बोलिसकेको स्मरण गराए ।
गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको प्रकरणमा सत्य–तथ्य के हो ? भन्ने कुरा छानबिन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘यो प्रकरणमा छानबिन हुँदैछ । छानबिनमा जे आउँछ, त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । यो प्रकरणमा सरकार कहीँपनि चुकेको छैन् ।’ उनले गल्ती गर्नेहरु सजाय भोग्न तयार हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
उनले भने,‘उहाँमाथि आरोप लागेपछि उहाँले राजीनामा दिएर छानबिनको लागि बाटो खोलिदिनुभएको छ । तर, अहिले नै उहाँलाई अपराधीजस्तो नगरौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो ।’ उनले मुलुकमा पछिल्लो २०/२५ वर्षमा के कति घटना भए ? र कसरी लुकाईयो ? भन्ने कुरा पनि पछिल्लो ललिता निवास प्रकरणको कुरा बाहिर आएपछि झन प्रष्ट भएको संकेत गरे ।